प्रवासी पुनले जोडिदिए ४ सि.सि. क्यामेरा – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७५ माघ २० गते आईतवार ०८:५० मा प्रकाशित
रोजगारीको शिलशिलामा विदेशमा रहेका पर्वतका एक यूवाले आफ्नो गाउँलाई सुरक्षित बनाउन भन्दै सि.सि. क्यामेरा जडान गरिदिएका छन् । जिल्लाको जलजला गाउँपालिकामा घर भई अहिले अष्ट्रेलियामा रहेका तुलबहादुर पुनले ४ ओटा सि.सि. क्यामेराहरु जडान गरिदिएका हुन् ।
उनले जलजला गाउँपालिकाकै मिलनचोकमा ३ ओटा र मोहनचोकमा एउटा क्यामेरा जडान गरिदिएका हुन् । मालढुङ्गा–बेनी सडक अन्तरगत पर्ने मिलन र मोहनचोकमा अपराध, दुर्घटना र विकृति न्यूनीकरणका लागि प्रहरीलाई सघाउन पुनले क्यामेरा जडान गरेका हुन् । सिसिटिभी र पावर ब्याकअप खरिद तथा जडानका लागि पुनले एक लाख चालीस हजार रुपैयाँ व्यक्तिगत रुपमा सहयोग गरेका छन् ।
सिसिटभी क्यामेराको जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल (रामकृष्ण)ले उद्घाटन गरे । अध्यक्ष मल्लले सहयोगदातालाई धन्यवाद दिदै गाउँपालिकाको बजार क्षेत्रको सुरक्षाका लागि थप सिसिटिभी क्यामेरा जडानको आवश्यकता महशुस गरिएको बताउँदै अपराध, विकृती, दुर्घटन न्युनीकरणका लागि समुदाय, स्थानीय सरकार र समुदायबीच सहकार्यमा जोड दिए ।
बागलुङः काठेखोलाको केन्द्र जोड्ने सडक कालोपत्र